खाद्य - स्वास्थ्य, गतिविधि र सामान्य जीवन को गुणवत्ता को मुख्य घटक को एक। तर, यी सबै घटक कार्यान्वयन गर्दै भन्ने सुनिश्चित गर्न, यसलाई आवश्यक समसामयिक आपूर्ति सही अनुपात र मात्रा मा केहि पदार्थ संग शरीर छ। कति यो इष्टतम कामकाज लागि प्रोटिन, बोसो, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन र खनिज आवश्यक: पोषण को शरीर विज्ञान मानव आहार को संरचना हुनुपर्छ जसमा तरिका अध्ययन गर्छ। साथै, विज्ञान यस शाखा को विधि र खानाको समय, यसको मात्रा र शारीरिक गुण मा केंद्रित।
मानव पोषण कार्बोहाइड्रेट को शरीर विज्ञान मा एक अग्रणी भूमिका प्रदान ऊर्जा चयापचय। धन्यवाद तिनीहरूलाई, व्यक्तिगत बल र ऊर्जा छिटो आपूर्ति, मानसिक गतिविधि लागि सहित प्राप्त गर्दछ। कार्बोहाइड्रेट धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरु:
प्लास्टिक (फरक अंगहरु को ऊतक को भाग);
नियामक (बोसो ओक्सीकरण प्रतिक्रिया ketones जम्मा गर्न अनुमति छैन);
(यो भयातुर प्रणालीमा सक्रिय प्रक्रियाहरू) toning;
detoxification (निकासी noxious रसायन)।
पानी अणु समान हाइड्रोजन र अक्सिजन अणुहरु को रासायनिक संरचना अनुपात।
यो खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकारका फेला:
monosaccharide यौगिकों (ग्लूकोज र फ्रैक्टोज प्रतिनिधित्व);
oligosaccharide मिश्रित (द्वारा saccharose, lactose र maltose प्रतिनिधित्व);
polysaccharide यौगिकों (प्रतिनिधित्व स्टार्च, glycogen, सेलूलोज र pectin पदार्थ)।
- कार्बोहाइड्रेट स्रोतहरू मुख्यतया बोट खाना छ: फल, तरकारी, अनाज, आदि ...
आधारभूत शरीर विज्ञान र खाद्य स्वच्छता बोसो मा एक खण्ड जस्तै खाना आधारभूत घटक बारेमा, किनभने आफ्नो ऊर्जा मूल्य को दुई पटक प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट भन्दा उच्च समावेश गरिएको छ। Lipids सेल संरचना र निर्माण संलग्न प्रक्रियाहरु को भाग हो।
tocopherol, लेसितिण, फैटी एसिड sterol: मात्र बोसो, एक dissolution र भिटामिन ए, डी र ई वर्तमान biologically सक्रिय पदार्थ को लिपिड यौगिकों को अवशोषण को उपस्थिति मा। खाना को स्वाद सुधार र बोसो को वाहेक संग सम्भव यसको पोषण मूल्य बढ्छ।
खाद्य पदार्थ मा बोसो - यो वास्तवमा, छ, ग्लिसरीन र फैटी एसिड को आवश्यक यौगिकों। दुई समूह मा हाल विभाजित: संतृप्त र असंतृप्त। जैविक शरीर विज्ञान शक्ति ठूलो महत्त्व हटाउँदछ , polyunsaturated फैटी एसिड भिटामिन तिनीहरूलाई equating।
असंतृप्त (तेल, पागल, बीउ) - पशु खाद्य पदार्थ मा lipids संतृप्त फैटी एसिड (पोर्क, मासु, पाठो, आदि ...) को बोट मा मा प्रस्तुत छ।
जीवनको एक आवश्यक शर्त रूपमा डिजाइन पोषण प्रोटीन को शरीर विज्ञान को आधारभूत। यो मानव शरीर मा सबै कक्षहरू र Tissues निर्माण गरिएको छ। प्रोटीन को कार्य विविध हो: प्लास्टिक, जो reproduces, सुरक्षा, antitoxic, परिवहन र अरूलाई उत्प्रेरक।
रासायनिक नाइट्रोजनीय प्रोटीन एमिनो एसिड बनेको जटिल पलिमर 25 प्रजाति खाना मा प्रस्तुत गर्दै छन्। तिनीहरूलाई को भन्दा शरीर (परस्पर) द्वारा प्ले छन्, केही मात्र खाना (आवश्यक) संग आउनुहोस्।
खातामा स्वच्छता र पोषण शरीर विज्ञान प्रोटिन उत्पादन, विशेष गरी सन्तुलित एमिनो एसिड संरचना संग, त्यहाँ पूर्ण प्रोटीन जो ती महत्त्व। विशेष यस सन्दर्भमा उपयुक्त पशु मूल (मासु, अन्डा, दूध) को उत्पादनहरू हुन्। प्लान्ट प्रोटीन अक्सर आवश्यक एमिनो एसिड जटिल मा कमी हो (भटमास, अनाज, सिमी, चोकर, र यति मा। डी।)।
खाद्य मूल कुराहरु शरीर विज्ञान विभिन्न स्तर को चयापचय संलग्न शरीर को सामान्य कामकाज लागि आवश्यक पदार्थ रूपमा macrocells छलफल। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण हड्डी को निर्माण को लागि सामाग्री क्याल्सियम र फस्फोरस आवश्यकता हो।
हो macroelements द्वारा:
क्याल्सियम (दूध, पनीर, चीज);
फस्फोरस (माछा, मासु, रोटी, चीज, सिमी, अनाज);
म्याग्नेसियम (breads, अनाज, सिमी, पागल);
सोडियम (सोडियम नुन);
पोटासियम (आलु, स्याउ, सिमी, मटर);
Chloro (रोटी, नुन);
सल्फर (मासु, माछा, अन्डा)।
macronutrients को कमी अंगहरु र प्रणाली विभिन्न रोगहरु निम्त्याउँछ, मुख्य हड्डी र रक्त नली असर गर्छ।
सूक्ष्म तत्व विशिष्ट कार्य को एक नम्बर, अधिकतम कार्यका लागि एक पुरा र यसको व्यक्तिगत अंगहरु रूपमा शरीर प्रदर्शन।
ट्रेस तत्व को समूह समावेश:
फलाम (पशु कलेजो, अनाज);
जस्ता (कलेजो, सिमी);
आयोडिन (शैवाल, कड लिवर तेल, समुद्र माछा);
फ्लोरो (समुद्र माछा, पानी, चाय)।
शरीर विज्ञान macro- र स्वास्थ्य कायम राख्न आवश्यक micronutrients को पर्याप्त नम्बर आहार खाद्य संगठन केन्द्रित छ।
को पाठयपुस्तक "जीवविज्ञान मा। पोषण को शरीर विज्ञान "(ग्रेड 7) धेरै खण्डहरू मा प्रस्तुत भिटामिन मा जानकारी। शरीर का अत्यावश्यक कार्यहरु मा उनको भूमिका छैन overestimated गर्न सकिन्छ। यी सक्रिय पदार्थ इन्जाइमहरु र चयापचय प्रक्रियाहरू संलग्न हर्मोन मा वर्तमान हो, शरीर र प्रणाली मा स्थिरता प्रदान गर्नुहोस्।
भिटामिन शरीर द्वारा उत्पादित छैन, त्यसैले यो आफ्नो आहार सेवन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। कमी रोगहरु को उपस्थिति तिर जान्छ, थकान, दक्षता र प्रतिरक्षा घट्यो।
सन्तुलित आहार निम्न भिटामिन समावेश गर्नुपर्छ:
एक - छाला, दृश्य acuity, प्रतिरक्षा को स्वास्थ्य र youthfulness समर्थन (स्रोतहरू: गाजर, अन्डा, दूध, माछा, कलेजो);
बी 1 - मांसपेशी र तंत्रिका फाइबर, ऊर्जा उत्पादन को कामकाज सुनिश्चित (स्रोतहरू: चामल, मासु, सिमी, पागल);
बी2- विकास र ऊर्जा चयापचय (स्रोतहरू: अण्डाको पहेंलो भाग, कुखुरा, माछा, खमीर) क्रियाशीलता;
बी6- कार्बोहाइड्रेट र बोसो metabolize मद्दत गर्छ, enzymatic प्रतिक्रिया (स्रोत: आलु, माछा, मासु, सारा अन्न रोटी, तरकारी) को समर्थन गर्दछ;
बी 12 - रक्तअल्पता, को स्नायु प्रणाली को विकार (स्रोतहरू: समुद्री भोजन, दूध, मासु, अन्डा) रोक्छ;
सी - प्रतिरक्षा प्रणाली, स्वस्थ दाँत, छाला र हड्डी समर्थन (स्रोतहरू: सुन्ताला, कागति, कालो currants, गुलाब नितम्ब, मिठाई मरिच);
(: फैटी माछा, दुग्ध उत्पादन स्रोतहरू); - डी क्याल्सियम को अवशोषण, दाँत र नङ को वृद्धि बढावा
ई -, सेलुलर स्तर मा ओक्सीकरण विरुद्ध शरीर सुरक्षा बढावा छाला पुनर्जनन (स्रोतहरू: मासु, तरकारी तेल, अनाज)।
पोषण को शरीर विज्ञान व्यक्ति को उमेर र जीवन शैली बनाइएको विशेष प्रणाली को रूप मा भिटामिन को सेवन, समावेश छ।
खाना सरसफाई र स्वच्छता व्यवहार - खातामा उत्पादन, खाना को शरीर विज्ञान को microbiological संरचना लिएर बाहेक। यसको सिद्धान्त निम्न नियम प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ:
आहार रूपमा विविध हुनुपर्छ।
हरेक दिन, धेरै पटक यो आवश्यक पीठो, अनाज वा आलु बनाइएका प्रयोग गर्न छ।
नियमित शारीरिक गतिविधि मनमोहक छ।
दैनिक ताजा फलफूल र तरकारी खान गर्नुपर्छ।
खाना मा बोसो को एक स्थायी रेकर्ड आवश्यक संयंत्र मा पशु को प्रतिस्थापन चाहेको छ।
परिष्कृत चीनी को खपत सीमित।
खाना गर्न नुन को वाहेक दुरुपयोग छैन।
खाना खाना पकाउने सुरक्षा र उत्पादन को उपयोगी गुण अधिकतम संरक्षण (प्राथमिकताको पकाउने, गश्त, पाक सहित एक माइक्रोवेव ओवन मा खाना पकाउने) उपलब्ध गराउनु पर्छ।
यी सरल नियमहरू अनुपालन खाना गुणस्तर सुधार हुनेछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, पोषण को शरीर विज्ञान, संग गर्नुहुन्छ जो - खाद्य उत्पादन को प्रविधि। एक आदर्श औद्योगिक अवस्थामा यस्तो तरिकाले संगठित हुनुपर्छ कच्चा माल आधारमा को पोषण मूल्य वृद्धि छ। उत्पादन को परम उपयोगिता निर्धारित गरिने सामग्री मात्र छैन पोषक को, तर पनि जो तिनीहरूले शरीर द्वारा assimilated गर्न सकिन्छ गर्न हदसम्म द्वारा। यो समस्या दुवै पाचन संग र अन्य शारीरिक प्रक्रिया को एक नम्बर संग जोडिएको छ।
सबै कठिनाइ भए तापनि यसलाई राम्रो तरिकाले उच्च गुणवत्ता खाना बाट कच्चा माल बासी अस्वाभाविक भन्दा धेरै राम्रो पचा लिया जान्छ र बनेको छ कि स्थापित छ। यो स्वादिष्ट र appetizing भोजन, अधिक उपयोगी यो शरीर को लागि हुनेछ। यो वास्तवमा खाद्य उत्पादन को प्रक्रिया मा छलफल हुनुपर्छ।
सरसफाइ मूल कुराहरु
प्रोटिन, बोसो, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन र जीवाणुतत्व विचार खनिज, पोषण शरीर विज्ञान सामग्री। सरसफाइ पनि विकास केन्द्रित छ व्यक्तिगत स्वच्छता को नियम को तयारीको र खाना को खपत मा। तिनीहरूले यी रोगजनकों दिइएका उत्पादनहरु को दूषण, ट्रिगरिङ खाना विषाक्तता र रोगहरु को एक नम्बर चेतावनी।
विशेष ध्यान खाना तयारी प्रतिष्ठानबाट मा सेनेटरी अवस्था भुक्तान छ खानपान। कर्मचारीहरु व्यक्तिगत स्वच्छता को उच्च स्तर ग्राहकहरु संग अन्तरक्रिया को संस्कृति असर गर्छ।
व्यक्तिगत सरसफाइ प्रक्रियाहरु को नियम हातमा, मुख, overalls, सञ्चालन अवस्था संगठन केही आवश्यकताहरू, कर्मचारीहरु को नियमित चिकित्सा परीक्षा प्रदान गर्नुहोस्।
व्यक्तिगत स्वच्छता जब खाने प्रत्येक व्यक्ति को हात को राम्ररी लुगा धुने, तर आवश्यकता द्वारा, र पूर्ण शरीर वस्त्र सफाई, व्यञ्जन एक व्यक्ति सेट प्रयोग समावेश छ। communicable रोगहरु को उपस्थिति अरूसँग सम्पर्क सीमित गर्नुपर्छ।
एक वैज्ञानिक अनुशासन रूपमा पोषण को शरीर विज्ञान
अनुशासन "पोषण को शरीर विज्ञान", माध्यमिक विद्यालयमा छोटकरीमा सिकाउनुभयो तैनाथ - व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाहरू मा। यो शारीरिक प्रणाली, मानव पोषण को खाना-सम्बन्धित, पर्यावरण र स्वास्थ्य विशेषताहरु, पाचन Basics को अध्ययन पनि समावेश छ। पोषक, आहार, को तैयारी, प्रशोधन र उत्पादन को भण्डारणमा स्वच्छता र सरसफाई अप चित्रकला को सिद्धान्त को अध्ययन गर्न समर्पित पाठ्यक्रम को एक महत्वपूर्ण भाग। समस्या को आर्थिक घटक कवर अन्तिम विषयगत खण्ड, - बिक्री को मूल कुराहरू पोषण को शरीर विज्ञान।
बोलीको Journalistic शैली
टोपोग्राफिक सर्वेक्षण: प्रकार, उद्देश्य र पूरा
नक्षत्र हाइड्रा: स्थान र चासो अंक
के बाट कालो जूता लगाउन?
प्रेम केटी को सुन्दर घोषणा
कसरी पाठकहरू हानेर "Twitter" मा? "चहचहाना" मा पाठकहरु को धोखाधारी को लागी धोखा दिइयो
नेटवर्क साथीहरूको गर्न सहकर्मी - यो के हो?
इर्कुत्स्क बार: ठेगाना र विवरण